Ahiahina kolikoly :: Raikitra ny fikarohana an’i Arizaka Raoul Rabekoto • AoRaha
Ahiahina kolikoly Raikitra ny fikarohana an’i Arizaka Raoul Rabekoto
Namoaka taratasy milaza fitadiavana an’i Arizaka Raoul Rabekoto, tale jeneralin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) teo aloha sady filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), ny Birao mahaleotena misahana ny ady amin’ny kolikoly (Bianco), omaly. Nahazo baiko avokoa ireo mpitandro ny filaminana manerana ny Nosy hitady azy, taorian’ny nahenoana fa lasa any Soisa ity filohan’ny FMF ity. Voarohirohy amina fanodinkodinana vola an’arivony tapitrisa ariary maromaro izy.
Tamin’ny 3 febroary 2020 no nivoahan’ny taratasy manakana azy tsy hivoaka any ivelan’i Madagasikara, taorian’ny fangatahan’ny Bianco noho ny raharaha momba azy. Niantso ny tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha ho eny Ambohibao ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly, sampana Antananarivo, tamin’ny 20 febroary lasa teo. Tsy nandalo tany anefa ity farany, araka ny fanambaran’ny Bianco. Nandefasana taratasy fampiantsoana fanindroany indray anefa izy, taorian’izany, saingy tsy nety tonga teny hatrany.
“Natetika anefa izy no nilaza fa rehefa ilain’ny Fitsarana na ny Bianco dia ho avy, amin’ny maha olombelona tompon’andraikitra azy”, hoy hatrany ny fanambaràna. Mbola tsy mino ny fitsoahana any ivelany kosa io rafitra miady amin’ny kolikoly io ka nampikaroka.
Isan’ireo nanaitra ny fanjakana ny habetsaky ny vola nampiasaina tamin’ny fanamboarana ny kianjan’i Vontovorona, izay mitentina 120 000 tapitrisa ariary. Ankoatra izany dia nanitikitika azy ireo ihany koa ny filazana fa manana vola miasa amin’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Air Austral i Arizaka Raoul Rabekoto.
Mandeha foana ny asan’ny Fmf
“Tsy misy fiantraikany amin’ny asan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) ny tsy maha eo ny filohany”, araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ity rafitra mitantana ny baolina kitra eto Madagasikara ity. “Misy hatrany ireo afaka misolo azy amin’ny andraikitra tokony horaisiny. Tsy voatery miandry azy avokoa izany rehetra izany satria efa misy ireo filoha lefitra napetraka hisolo azy, rehefa tsy eto an-toerana ny filoha”, hoy hatrany ity loharanom-baovao ity. Nanamafy ity farany fa “tsy misy ahiana ny heverin’ny maro ho sazy mety hanjo antsika satria tsy amin’ny maha filohan’ny Federasiona no itadiavan’ny Fitsarana azy fa tamin’ny naha mpitantana ny Cnaps azy”.
Ahiana anefa ny mety hisian’ny fifidianana mialoha ny fotoana rehefa tsapa ny fahabangan-toeran’ity filohan’ny Federasiona ity. Naman’ny manala tena ireo olona tsy hita na tsy mivory ao anatin’ny telo volana, araka ny fitsipika anatiny mifehy ny rafitra federaly. Aorian’izay dia mandray ny toerana amin’ny fampandehanan-draharaha ny filoha lefitra voalohany. Voalazan’ny loharanom-baovao hatrany fa “ny filoha lefitra no mikarakara ny fifidianana mialoha ny fotoana”, rehefa voamarin’ny fivoriambe ny tsy maha eo an-toerana hatrany ny filohan’ny FMF.
Raha toa kosa ka voaheloka noho ny raharaham-pitsarana mialoha ny telo volana ny filohan’ny Federasiona dia miditra an-tsehatra avy hatrany ny filoha lefitra voalohany manatanteraka ny fampandehanan-draharaha sy mikarakara fifidianana alohan’ ny fotoana.
Famatsiana Nidina ny vidim-bary eto an-drenivohitra
Hanomboka amin’ny septambra ireo fanadinam-panjakana
Fitsaboana ny covid-19 Hanampy ny fanjakana ireo toerana sy mpitsabo tsy miankina
Fahasitranana avy amin’ny Covid-organics
Fankatoavana didy hitsivolana :: Hivory tsy ara-potoana ireo Antenimiera
Baolina kitra – CAN 2021 :: Mamaramparana ny fandrafetana ny lisitr’ireo mpilalao i Nicolas Dupuis